अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यो घरेलु उपाय- beauty tips
HomeHealth & Fitnessअनुहार गोरो र चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यो घरेलु उपाय- beauty...
अनुहारमा जमेको फोहोर, मृत कोषिकाले अनुहारलाई थप कालो र चमकहीन बनाइरहेको हुन्छ । कागतीको रस र गुलाबजलको मिश्रणले अनुहारमा भएको फोहोर निकाल्छ । यसले मृत कोषिकाहरु निकाल्छ, अनुहार सफा गर्छ । त्यसैले कागतीको रस र गुलाब जलको मिश्रणले नियमित रुपमा मसाज गर्नाले अनुहार गोरो, दाग धब्बा रहित हुनुका साथै अनुहारको चमक समेत बढ्छ । यसले व्यक्ति आफ्नो वास्तविक उमेरभन्दा जवान देखिन समेत मद्दत गर्छ। #beauty tips
Previous articleभर्खरै आयो दुखद खबर : भारतमा आगलागीमा परी १४ वर्षीय नेपाली किशोरको ज्यान गयो
Next articleजिप दुर्घटनामा दुई प्रहरीको मृत्यु